Thelekisa iintlobo zeShishini-Imibutho, ii-LLC kunye nokuBambisana
Sebenzisa le tshathi ukuthelekisa ngokukhawuleza iimpawu zeziko ngaphambi kokufaka. Ngolwazi olongezelelekileyo malunga neentlobo zeshishini, irhafu, uthelekiso kunye neendidi zombutho, nceda undwendwele ezi khonkco zilandelayo:
Zonke iintlobo zeQumrhu loShishino zichaziwe
Thelekisa i-S Corporation kwi-LLC
Iindidi zeNkampani zichaziwe
IQumrhu nxamnye neRhafu ye-LLC
Ukukhuselwa komthetho wabanini xa ishishini limangalelwa? Hayi EWE EWE EWE
Ukukhuselwa kwempahla yexabiso kwimpahla yeshishini xa umnini-mmangalelwa? Hayi Hayi Hayi EWE
Ukongezwa kweerhafu zeshishini ezikhoyo? Hayi EWE EWE EWE
Ngubani ohlawuliswa irhafu kwinzuzo yeshishini? umnini IQumrhu shareholder Ukhetho lwakho-Umnini okanye iNkampani
Usebenzisa nini? Ayikhuthazwa Ungumnikazi weshishini, uthathe ithuba lokuhlawula irhafu yamaqumrhu esezantsi ngokuthelekiswa neerhafu zerhafu yomntu ngamnye, inkampani ethengisa esidlangalaleni, ukunciphisa iindleko zonyango. Ungumnini weshishini apho umnini eya kuhlawulela kuye uninzi lweenzuzo ezihlanganisiweyo kuye. Ukuba ngumnini wepropathi. Ukugcina imali ukhuseleko lweasethi. Ukuba nesitokhwe kwimibutho yomntu.
benefits Bambalwa-uxanduva oluphezulu kunye nokuncitshiswa kwerhafu ezimbalwa kunezinye iindlela ezidweliswe apha. Yi-15% kuphela yerhafu yokudibanisa kwi-50,000 yokuqala yengeniso. Gcina i-15.3% kwiirhafu. Zibhatale umvuzo omncinci kodwa ofanelekileyo kwaye uhlawule okuseleyo "njengokwabiwa kwabanini zabelo" ukugcina i-12.4% yoKhuseleko lweNtlalo kunye ne-2.9% ye-Medicare yolondolozo olupheleleyo lwe-15.3% kule nxalenye yengeniso. Xa umnini (ilungu) emangalelwa kukho izibonelelo ezisemthethweni zokukhusela iiasethi ezigcinwe ngaphakathi kwi-LLC ekubeni zithathwe.
Rhafu Njengobunini babanini - yonke ingeniso ingena iye kumnini. Umbutho uhlawula iirhafu zawo emva kokutsalwa. (Yonke imibutho "yenzuzo" ihlawuliswa irhafu njenge-C ngokudibeneyo.) Abanini zabelo bahlawula irhafu emva kokuncitshiswa. (Kuya kufuneka ulayishe unyulo ukuze ufumane ubume bombutho we-S). Abanini zabelo banokuba ngabemi baseMelika kuphela okanye abaphambukeli. Ukhetho lwakho. Unokurhafiswa njengokuphela kobunini, ubuhlakani, iqumrhu lika-C okanye iqumrhu elingu-S. Ngokwendalo-irhafu njengobunini babanini ** ukuba umnini omnye, njengentsebenziswano ukuba babini okanye nangaphezulu abanini. Fayilisha ifom yerhafu ekufuneka irhafisiwe njengequmrhu lika-C kunye nefom eyongezelelweyo yokurhafiswa njengequmrhu elingu-S
Ubunini Umnini wedwa shareholder shareholder Ilungu
ubunkokheli Umnini wedwa Igosa / uMlawuli (inokuba ngumntu ofanayo) Igosa / uMlawuli (inokuba ngumntu ofanayo) Umphathi / iLungu (inokuba ngumntu omnye)
Ukunyusa imali Ukuboleka imali eqinisekiswe ngokobuqu Thengisa izabelo zesitokhwe ukuze unyuse imali ngaphandle kwesiqinisekiso sabanini (ngokuxhomekeke kwimithetho esebenzayo) Thengisa izabelo zesitokhwe ukuze unyuse imali ngaphandle kwesiqinisekiso sabanini (ngokuxhomekeke kwimithetho esebenzayo) Thengisa inzala yobulungu ukuze unyuse imali ngaphandle kwesiqinisekiso sabanini (ngokuxhomekeke kwimithetho esebenzayo)
Amaxwebhu eSikhokelo nanye Imithetho Imithetho Isivumelwano sokuSebenza
Amaxwebhu obunini nanye izabelo izabelo Isivumelwano sokusebenza / iiyunithi zobulungu
Ukurhafiswa kabini kuyafuneka? Hayi HAYI-kuphela ukuba izabelo ziyahlawulwa. Yiyo loo nto uhlawule imivuzo kunye neebhonasi kunezahlulo. Hayi Hayi
Ngaba ishishini lingaxhuzula imivuzo kumnini? HAYI - ishishini kunye nomnini banye ngokufanayo ngeenjongo zerhafu. EWE EWE EWE
* Oonobumba "C" kunye "S" bamele izahluko kwikhowudi yerhafu ye-IRS. Imibutho ye-C kunye nemibutho ye-S ayizizo iintlobo zemibutho kodwa ziindidi zerhafu yomdibaniso.
** Indlela irhafu erhafiswa ngayo kwaye ikhusela njani umniniyo kwizimangalo yimicimbi emibini eyahlukeneyo. Umzekelo, ubunini bodwa abuboneleli ngokhuseleko lwabanini. Nangona kunjalo, i-LLC erhafiswa njengokuphela kobunini bayo obunakho.
Ukuhlaziywa kokugqibela ngoDisemba 25, 2017